Ny majika an'ny druida. - Druide gaulois.
Ny majika an'ny druida. Magicien druid Magicien druid Anisan'ireo olona mitsidika ny tranokalako am-pahazotoana ireo izay manana fomba fijery obscurantista momba ny herin'ny Druids. Tsy ilay ampahany tena haiko indrindra akory, na izany aza, hoteneniko aminao izay azoko ambara aminao. Ho an'izay manontany tena hoe inona no ilaina vakoka, dia valiako fa raha ny marina, ny rantsan-tananao dia ampy hanaovana izany rehetra izany. Hahafantatra ireo voalohany. Tsy misy fanontaniana ho ahy raha manome fahaizana manokana amin'ny olon-drehetra fotsiny, ka ... tsy hiteny ny zava-drehetra aho. Voalohany, ny fahazavan'ny fiainana dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny haizina manodidina azy. Ny mandrakizay dia tsy manam-potoana, efa fantatrao, ny hazavan'ny fiainana, ilay ampialanao dia mandrakizay. Misy ny fiainana satria misy ny tsy fiainana, ny ambanilanitra. Toerana iray mitohy ny tantaran'ny anjaran'ny tsirairay, tsy manelingelina izao tontolo izao, izany dia hanampy aho fa isika olombelona, miaina eto ambany tontolo, eo am-pototry ny hazo, mitarika amin'ny lalan'ny hazavana eo afovoany isika. tontolo eo anelanelan'ny haizina sy ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. ny tontolo iray na ny roa hafa dia afaka mifangaro ary manana hetsika tsy feno. Ny tanjon'ny fiainantsika dia ny miroso mankany amin'ny hazavana sy ny hafanana izay mampitombo azy toy ny zavamaniry. Ny fikorianan'ny fotoana tena ilaina dia mandreraka ny vatana ary mampitombo ny fanahy. Ny fanahy dia afaka ny ho tonga mandrakizay araka ny fampianarana Druidic ary amin'ny alàlan'ny herin'ny fanahy (ety an-tany) no iasan'ny majia. (Iray amin'ireo fombafomba fanaon'ny magus ny fampanjanahana ny tany malala, tsy mitsiriritra azy isika, manome azy ny tenantsika, ary izy no manome antsika ny heriny raha mila antsika izy) anjara Ny lahatra dia fiheverana diso ho an'ny sasany ary marina ho an'ny hafa, raha ny marina ny hevitra momba ny ho vokatry ny anjaran'ny tena. Anisan'ireo druid ireo ny sasany amin'ireo numerologists ofisialy izay mampihatra ny siansa isa, ary indrindra ny isan'ny teraka, anarana ary daty nisaina tamin'ny kintana. Araka ny filazan'izy ireo, ary ekeko amin'ny ampahany izy ireo, ny daty sy ny fotoana dia misy akony lehibe amin'ny zava-mitranga izay manelanelana amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Rehefa avy nanamarina aho dia tsy maintsy milaza fa ny valiny amin'ny ankapobeny dia manakorontana amin'ny fahamarinana, indrindra fa ny druida sasany dia tena tsara amin'ity faritra ity. Tokony hiaiky ihany koa aho fa ity siansa momba ny fotoana sy ny vanim-potoana ity dia an'ny finoana tany am-boalohany momba ny ara-nofo an'ny Gallic. Tena asa mampidi-doza tokoa io. Ho fanampin'ireny fifandraisana ara-nofo ireny dia misy finoana hafa koa arak'izay zavatra na olona sasany afaka miditra an-tsehatra amin'ny fomba manan-danja amin'ny famelabelarana ny tanjon'ny tena manokana. "Aura" tsara na ratsy. Misy zavatra, fivavahana na fomban-drazana, antokom-pivavahana, ary vanim-potoana izay misy fiatraikany amin'ny anjaran'ny tsirairay. Toy ny hoe manimba ny sasany ny hery aterak'izy ireo ary ny hafa kosa prolix. (Efa mba nanontany tena ve ianao hoe maninona ny olona mahomby toa izany dia lasa mitafy akanjo, zavatra na fahazarana tsy tafiditra ..) Averina indray, tsy azoko lavina ny marina, nefa tsy obscurantista aho, ohatra: raha misy manome vola kely 1 sento anao dia esory haingana araka izay tratra. Ireo sombin-javatra ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny lanja lojika asehon'izy ireo, efa hafahafa io, fa ankoatr'izay dia misy fiantraikany amin'ny angovo manimba izany. Ohatra iray hafa, ny bateria kely 6v natao ho an'ny fanilo, any, io ny lokony mena izay manimba. ho an'ity drafitra voalohany ity dia ilaina ny mahatadidy fa ny olona, mahay mangoraka na tsia, dia afaka mifampiraharaha amin'ny anjaranao sy ny herinao ara-nofo bebe kokoa na latsaka, amin'ny fomba tsara na amin'ny fomba ratsy, ireo olona ireo dia mety ho toa mangoraka anao na tsia, izy ireo hihetsika tsy mahatsiaro tena amin'ny tantaranao indraindray amin'ny fomba manan-danja, io ilay antsoina hoe trondro na vavahady vintana. Ary ity fihetsika "majika" ity dia tsy voatery hifandray amin'ny fihetsik'izy ireo; Miampita fotsiny ny iray amin'izy ireo ho an'ny andro mangina mba hivadika ho imbroglio na paradisa iray andro, mianara mahita azy ireo ary tsy hanana ahiahy firy ianao, hoy aho aminao. Raha ny daty sy ny vanim-potoana no resahina, dia misy vokany amin'ny lahatra izany, toy ny anarana manokana na mahazatra, ireo zavatra izay mitondra angovo miovaova amin'ny herinao manokana dia tokony hanintona anao koa. Ary ireo zavatra ireo dia tsy voatery ho zavatra majika fanta-daza; Tokony ho takatra fa ny zavaboary tsirairay dia mitondra aura, hery ara-nofo manokana. Ity aura ity no hiasa amin'ny fambara tsara na ratsy amin'ny anjaranao; ohatra, raha mamakafaka kely ny fiainan'ny olona tena lehibe ianao dia ho tsapanao fa misy olona sasany liana te hahafanta-javatra foana eo anilany eo amin'ny toe-javatra sasany, ary koa ny toetrany manokanannes dia tsy manatona toerana sasany, na ny hafa tsy tokony hivoaka amin'ny andro sasany, na amin'ny daty sasany ....... ary izany rehetra izany dia avy amin'ny olona fantatra amin'ny fahamarinan-toerana any Cartesian ... Nanomboka tamin'i Madona ka hatrany Charles V, dia nisy foana ireo fifandraisana ireo. Majia fotsy. Misy ny olona mitady fahefana lehibe, ireo no tsy mahita tsara mihitsy. Ny hoe mifanaraka amin'ny herin'izao tontolo izao dia midika koa fa tsy fanananao. Misy ihany koa ireo izay mitady hisoroka ny vintan-dratsy sy ny làlana ratsy, ary ao no misy ny majika tena avy amin'ny White Druids. Ny vato, ohatra, dia manana hery lehibe satria manakaiky ny mandrakizay. Tsy hifantoka amin'ny loko sy ny hakitroka rehetra aho satria ho potika ny fifandanjana, ilaina amin'ny fanaovana majika ny tsiambaratelo. Indrindra rehefa mianatra. Raha sendra manana vanim-potoana masiaka ianao dia manaova ody fotsy fotsiny, manafatra siansa ary atsahatra ny ozona. Ex: Ario amina aura ratsy ny zavatra rehetra. Rehefa toerana misy marika ara-panahy marika aura tsy mahazaka zavatra iray ara-panahy dia asio vato fotsy eo amboniny dia ampy ny sombin-quartz kely. Fetsy kely tena mandaitra iray hafa: apetraho ny telozoro mitovy lenta, manondro midina, eo alohany na eo an-tampon'ny entanao. Mifanohitra amin'ny Freemasonry izany, ary miaro ny tsy Mason. Zavatra iray hafa, ny tapa-kazo, ary indrindra ny hazo ôaka izay mampiato ny ody mora foana, apetraho eo am-baravaran'ny tranonao raha ilaina izany. Tsy mila miasa be loatra io fa esory fotsiny ny volony sy ny lavany mety. Ity dia tsy maintsy mahitsy sy mazava. Ny essentielle hafa dia mandaitra kokoa in-droa indroa, amin'ny elongated S, avelao indray ny endriny voajanahary, mainty kely. Ilay Sickle volamena Ny fijinjam-bolamenan'ny druids dia vouge, fijinjam-bolo lava. Diso ilay teny hoe billhook volamena satria fitaovana lehibe kokoa izy io. Izy io dia manana lanja ara-panahy sy ara-panahy tokana, rehefa nandinika firavaka kely dia azoko lazaina aminao fa ny volamena dia marefo loatra amin'ny vy ka tsy azo ampiasaina hanapahana zavatra ankoatry ny fitaovana malefaka toy ny dibera ohatra, ka ho an'ny hazo voapaika izay misy "filamente mistletoe "... tsia ... tsy maintsy nopotehinao ny lelany isaky ny avy. Raha ny marina, ny tandindon'ity vouge masina ity dia mifototra amin'ny fananana endrika volana, dia tena zava-dehibe izy io, ary raha ny marina dia nampiasaina hikapa ilay hazo ara-panahy, ny an'ny fahalalana ary ny fanahy. Izy io dia endrika misintona amin'ny hevitra enti-mampianatra. Majika fiarovana ny hazo. Zavamaniry mahagaga. Zavamaniry mahagaga. Ireo izay efa nahita ny maha-lehibe an'i Ponthus ao amin'ny alan'i Brocéliande dia mety nahita "sary sokitra" vita tamin'ny vato sy sampana nilahatra boribory nanodidina ny Zavaboary. Majia fiarovana. Tsy azoko atao ny manazava ampahibemaso ny tsiambaratelon'ireto zava-kanto ireto, koa azafady azafady mba tsy namelabelatra ilay lohahevitra. Toy izany koa no ataoko amin'ireo karazana fahalalana rehetra ireo izay an'ny de drtoids ary ny famoahana ireo vao manomboka. Ny hazo volamena nambolena tao Brocéliande dia sary sokitra, ny volamena dia vy vy ataon'ny hery maizina, ary ankoatr'izay ny firahalahiana izay namboly azy teo ambany fiahian'ny mpizahatany dia klioba manokana. Ny vongan-dranomasina an'ny druids. Taterina amin'ny soratra taloha fa ny vorona ranomasina fosily dia iray amin'ireo zavatra masina indrindra misy. Ity vato kely fosily ity dia manambara kintana misy rantsana 5, io no dingana farany amin'ny biby, izany hoe ny fiainana ara-batana. Nantsoinay ity vato ity: ny trondro kintana. (Tsy dia itoviana amin'ny trondro kintana hita eny amoron-dranomasina) Tamin'ny alàlan'ny fiampitana ilay angano dia afaka namintina aho fa ity voromailala amoron-dranomasina ity dia ho vokatry ny kintana fitifirana izay nianjera tamin'ny tany, avy tany amin'ny ranomasimbein'ny lanitra. Antsoina hoe "kintana mangidy" koa izy io satria io no fifandraisana farany misy eo amin'ny ara-batana sy masina alohan'ny fahafatesan'ny vatana. Izaho koa dia mihevitra fa ny porofon'ilay andalan-teny nataon'i druid tamina toerana masina, toy ny fombafomba mahazatra. (Mikasika ny vazivazy: Raha ny fanovana ho sahona dia mora kokoa, manorata zavatra somary manaitra ihany ary manomboka mitomany ny mpamaky: "inona, inona, COA, COOA .... manokana, efa nanova maro aho druids ho sahona. Ary indray andro any dia hataoko lasa saobakaka ny Papa Katolika, hoy izy amiko: miampita, minoa, crooaa .... ary .... sns., prosaically, heveriko fa tokony hahatadidy izany ianao triang kely kely, aseho amin'ity endrika sangisangy voalohany ity, miresaka mivantana amin'ireo tsy mahatsiaro tena ary ny habeny dia misy ampahany amin'ny mazia, ankafizin'ny sekta matetika. (Tsy misy fahitana mialoha, tsy misy fanjakan'ny tsy mahatsiaro tena) Ny ala Fanahy Fanahy Rehefa vaovao amin'ny faribolana Druidic ianao dia tsy maintsy misy fiainana any anaty ala. Hampianatra anao zavatra tena lehibe izany.Ary hasehoko anao ny fihaonan'ireo angovo. Raha fintinina, raha eken'ny ala ianao fa anisan'ny maha-izy azy ... dia ho faly ianao ary tsy hanao risika na inona na inona amin'ny loza ateraky ny bibidia. Raha ny momba ny macrocosm lehibe an'ny planeta dia mandeha ihany koa izy io, ireo entity lehibe izay manaiky sy miaro ny faritra misy azy ireo. Amin'ny fiaramanidin'ny etera sy angovo ary koa amin'ny fiaramanidina ara-batana. Anjaranao ny manapa-kevitra amin'ny tontolo iza no hanaiky anao tsara indrindra, ary indrindra izay tontolo voalohany: ny an'i Etunia. Toy izao no anaovana sandoka ny rohy miverina amin'ny natiora sy ny loharanon'aina. Ny ala izay itoeran'andriamanitra dia voalaza ao amin'ny takelaka Chamalières, pejy "culte". Ala iray izay tian'ireo druida aleha, manandratra ny tenany amin'ny andriamanitra. Magic of time. Efa mieritreritra ve ianao fa hiresaka aminao momba ny majikan'ny fotoana ho tononkalo aho? Tsia, hiezaka aho hampifandray amin'ity tranga paranormal ity izay vitsy no mahalala. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe misy olona sasany tsy maintsy mizaha azy io imbetsaka mba hahazoana asa, matetika ireo olona ireo dia mieritreritra fa tsy mahay mandanjalanja izy ary ny antony mahatonga ny olan'izy ireo irery. Raha ny hafa kosa, tsy mametraka fanontaniana, miasa amin'ny hafainganam-pandeha avo roa heny na telo aza, nefa tsy tsikaritr'izy ireo. Hiresaka amin'ireo izay tsy vintana aho, rehefa manao asa ianao, amin'ny faran'ny io dia azonao antoka fa nahavita tsara ianao, tonga lafatra ny zava-drehetra ary ... kelikely rehefa manamarina ianao dia tsapanao fa tsy maintsy manomboka indray ianao ... toy ny hoe ny asa efa vitanao dia ... nifindra, nivadika ..... Ary tokoa, io karazana fahantrana io dia mitovy foana no mitranga ... fa ny hafa kosa ... tsy mba ... miasa miaraka amin'ny masony mihidy ary ny tànany ao aorin-damosiny, handroso ihany ny asa .... Alao an-tsaina ny fotoana maha-miovaova, toy ny fisafidianana izay mandresy sy izay hahavery azy. Alao an-tsaina hoe ny herinao dia manova anao ny tantaranao, mamerina ny tombony amin'ny fotoana fanampiny ho an'ny olon-kafa ... Rehefa namaky ity lahatsoratra ity ianao dia tadidio foana ny hamerina hijery ny anjaranao rehetra aorian'ny nahavitan'izy ireo .... ary avy eo indray ... ary jereo ny tsy fitovizany. Mety ho gaga ianao. Tsy izy rehetra, fa betsaka ihany. Mianara manoratra ireo toerana, fotoana, andro ary volana tsy mahasoa anao ary ovao izy ireo. Ho hitanao izao lazaiko anao anio izao. Druids dia mahalala tsara an'io karazana trangan-javatra io .. paranormal. Hevitra Schizophrenic? Misy olona an-tapitrisany an'arivony tapitrisa eto amin'ity planeta ity, raha schizophrenic daholo izy ireo dia mety hikorontana. Ireo vanim-potoana manimba izay misy an-tsoratra amin'ny kalandrie hita tao Coligny. tarehimarika Efa misy pejy natokana ho an'ireo isa ao amin'ny Druidotheque, saingy misy lafiny majika tsara amin'ireo isa, ary koa amin'ireo isa mahazatra ampiasainao. Hery lehibe iray avy amin'ny isa sy ny lokony, ohatra. Averiko indray fa tsy hiteny ny zava-drehetra aho, fa ... azonao jerena eto amin'ity lafiny ity ny ... mofo sy divay Tsy isalasalana fa voamarikao fa ny trano sasany na tranobe hafa dia manana marika ara-pivavahana eo an-tampon'ny vavahady, tafo na vavahady mihitsy aza. Ity tandindona ity dia misy hetsika mazava ao amin'ilay tranonkala izay nanehoana azy ireo. Ho anay, io marika io dia ny trixel (na triscel) raha azo atao amin'ny hazo. Tsy maintsy apetraka amin'ny toerana avo avo izany mba hahitana azy miaraka amin'ireo kintana any aoriana. Tena vahiny? Miala sasatra kely izahay, tsy mino mihoatra ny aminao aho amin'ny fisian'ny extraterrestrials, farafaharatsiny tsy eo amin'ny fisian'izy ireo eto an-tany. Raisiko ity ohatra ity mba hisaintsainana kely ny fotoana sy ny tantara mifamatotra. Betsaka ny fijoroana ho vavolombelona momba ny fisian'ny zavaboary avy amin'ny habakabaka ety an-tany, hany ka lasa nanelingelina olona an'arivony maro izany. Raha ny fijerinay Druidic dia misy tontolo maromaro na tantara maromaro hafa momba an'ity tontolo ity ihany. Ka mety ho zava-misy tsy azo tanterahina ho an'ny ankamaroan'ny olona, izay miaina ny tantara manandanja indrindra, izay mifehy ny planeta ... tsy hitovy amin'ny an'ny vitsy an'isa. Midika izany fa ho nahita teratany vahiny na trangan-javatra tsy mampino hafa tokoa izy ireo, raha ... tsy mino izany isika ka tsy mahita ireo zavatra ireo ... Eto aho dia manasongadina fa ity tontolo afovoany ity dia ahitana tantara maro samy hafa be dia be avy amin'izy samy izy ary ny sasany manaitra, tsy amin'ny sehatra mahazatra. Avy eo aho nametraka ny fanontaniana tena ilaina izay valiny mety hitondra fanazavana ho an'ny rehetra: iza no mamorona ny tantaran'izao tontolo izao, amin'ny fironana sy ny finoana samy hafa? Ary faritoiko ny andraikitry ny mpamosavy druid: hahazoana antoka fa izay an'ny tontolon'ny nofinofy sy ny nofinofy sisa, ary hanafoana ny fikorianan'nyindrisy fa mametraka zavatra paranormal eo amin'ny tontolon'ny vatana. Manety ny hazon'ny eritreritra ka mamerina ny fifandanjany. Ny herin'ny natiora. Tokony ho takatra fa miaina eo amin'ny tontolon'ny fanahy sy ny hery ara-tsaina amin'ny fotoana isika. Mamolavola tena, mitarika tafiotra ara-tsaina, maka ny fanoherana ny vato, manao ranonorana manondraka ireo loharano masina sy ara-panahy ... eny, azo atao izany. Hampianatra anao ny fomba filozofia. Ireo anti-mpamosavy. Misy karazana mpamosavy izay misongadina amin'ity raharaha ratsy ity izay obscurantism. Izy io dia ny fametrahana cabalistic, ity iray ity dia mifototra amin'ny fitsipika mahafaty, mampiasa rafitra tambajotra izay mamandrika ny angovo tena ilaina izy. Tsy isalasalana fa ho hitanao amin'ny fikarohana nataonao fa ny tetika Cabalist (fantatra amin'ny toetrany sy ny tanjony anatiny, ilay endrika toy ny labirinina tsy misy fidirana na fivoahana izay mitondra any amin'ny antom-panjakan'ny demonia) dia nampiasain'ny neo-druids sasany hametrahana ny fanadiovana azy ireo ., dia hita ihany koa fa mihatra amin'ny kolontsaina hafa toa ny an'ny Odin, Nordic sy Viking, sy ny hafa. Ho mora loatra ny hiampangana ny kolotsaina jiosy amin'ny fampiasana ity mazia mainty ity, raha ny tena izy, ireo izay mampiasa azy io indrindra dia tsy avy amin'ny jiosy akory. Tsy misy ifandraisany amintsika ireo olona ireo, ankoatr'izay dia hanohitra azy ireo izany. Ny tetika ampiasaina dia prismatic fa tsy an'ny vato voajanahary, tsy misy ny ho avy ao. Zavatra iray monja no holazaiko amin'izy ireo: na dia nosoloin'ireo hafa filozofika kokoa aza ny teny taloha dia fantatra, tapaka ny rojonao, ary ireo izay miziriziry dia tsy hanohitra hatramin'ny maoderina. Hypnosis. Ny hypnosis dia siansa fantatra indrindra amin'ny fampisehoana. Druids dia afaka mampiasa azy koa, indrindra amin'ny alàlan'ny tononkalo izay matetika afangaroan'ny olona iray ny teny roa toa mitovy fa misy dikany kely hafa. Ny gadona sy ny tarehimarika dia ampiasaina amin'ny zavakanto fitantarana tantara mba hametrahana ny mpihaino transcendence iray, fanjakana manonofinofy. Majika anarana Ny majia lehibe dia mitoetra amin'ny teny sy anarana mety. Ny kolontsaina sasany dia mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ny anarana hoe fiaviana eoropeanina mba hampifanaraka azy ireo amin'ny herin'ny fanahy. Ny ilaina mba hiarovan-tena dia ny famadihana ny fomba. * Kristiana, Ny iray hafa: Marie = Mori Midika izany: ny ranomasina, ary ny reny. * Jerosalema Izay tsy maintsy midika hoe mihoatra na latsaka amin'ny Gaulish voalohany: Jé (ford aiza ié): lehibe. Eru: inona ny manodidina, ilay toerana. Sa: masoandro, hafanana. Ele: inona ny mazava. Emi: fitiavana, fahalemem-panahy. ny toerana mafana lehibe. Mazava ho azy fa miverina amin'ny fiaingana ara-piteny sy ara-panahy sasany isika. * (Nb: ny abidia Gallic masina dia maneho ny 1/3 amin'ny tontolon'ny fanahy na dia ankehitriny aza) Rehefa manoratra ny anganoo ianao dia ilaina ny mampiditra ireo anarana ireo ao anatin'ny tontolon'ny fahatakarana Gallic anao. Ho hitanao fa ny anarana manan-danja rehetra, ny malaza indrindra eto an-tany dia manana dikany mazava tsara amin'ny fiteny masina Gallic ary tsy kisendrasendra izany. Ireo teny voarara. Majika Druidic. Majika Druidic. Ary eny, ny saina dia voaforon'ny teny sy isa, kajy, loko, dikany. Ny saina iraisana dia mampiasa saina iraisana mitovy amin'ny foko iray manontolo. Ireo teny mitovy, ny teny fototra ihany. Ary ny teny avy amin'ny kolontsaina hafa, tena hafa, satria teraka tany amin'ny faritany misy toetrandro hafa, manimba ny lova angovo an'ny vondrona iray naorina nandritra ny an'arivony taona maro. Misy noho izany ny teny voajanahary izay manimba antsika ara-panahy, satria avy amina vondrona eritreritra hafa. Ex: aza milaza hoe "kristiana", antsoina hoe "prisma". Aza manoratra "angano" mihitsy, manoratra "angano". Ny "Chance" dia tokony hosoloina "improbable". Mahagaga, sa tsy izany, ary marina indrindra ...... "tsy mampino" angaha tsy teny mety izany, "mahafinaritra", tsy ho fitenenana ve izany? ... sns ... Mianara mahita azy ireo. Tazomy ny teny toa ny fiheverana sy ny fandrindrana satria mifanandrify amin'ny plural Gallic. Betsaka noho ny noeritreretinao azy. Halaviro ny teny rehetra mifarana amin'ny "-ion", "définition", "religion" raha toa ka tsy tafiditra ao anatin'ny toe-javatra maro ... dia anisan'ny vondrona mpiditra an-tsehatra izy ireo. Raha azo atao dia ampiasao ireo manana sanda ratsy, "komandy", "deflagration" amin'ny singular .... sns. Mety ho toa tsy misy dikany izany, kanefa, manoro hevitra an'ireo tsy nanam-pahalalana aho mba hanova kely ny fitenin'izy ireo ankehitriny, majika daholo izao tontolo izao eto ambany. Izao ve no hilazana fa manana fiteny manokana ireo druida ...... eny, ary izany no antony tsy nanoratana ny antokom-pinoana, ity tenin'ny magi ity, hitako ny ankamaroany. ............. Ny dihin'ny adala. Ity dia folklore azo antoka kokoa noho ny majika tena izy, kanefa, amin'ny fiandrasana dia manoratra ny fampahalalana amin'ity takelaka ity aho. Amin'ny iray amin'ireo vola madinika GallicSes, mora fantatsika ny toetra amam-panahy mandihy amin'ala ao afovoan'ny zavamaneno mihantona eny amin'ny rivotra, dia voamariky ny gadona. Manana angano taloha mifandraika amin'ilay trangan-javatra isika, manomboka mandihy mandritra ny andro sy alina ny olona nefa tsy mijanona, mihamaro mandritra ny fe-potoana iray ny mpandihy (iray volana eo ho eo) mandra-pahafatiny rehetra. Tamin'ny 1518 dia niseho indray ilay fisehoan-javatra tsy nisy fanazavana.